Mpikatroka Miezaka Mamafa Ny Fanilikilihana Ateraky Politikan’ny Governemanta Amin’ny Resaka Fanalan-jaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Janoary 2016 6:26 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Català, 日本語, Español, 한국어, English
“Ny vatako, ny zoko!” Fihetsiketsehana manohitra ny lalàna mandràra ny fanalan-jaza ao Skopke, Makedonia, 29 May 2013. Sary avy amin'i Vanco Dzambaski (CC BY-NC-SA).
Nampiasa ny 10 Desambra, Andron'ny Zon'Olombelona ny tanora mpikatroka avy ao amin'ny fikambanana tsy miankina momba ny fanabeazana ara-pahasalamana H.E.R.A mba hanatontosa hetsika manohitra ny famerana ny zon'ny vehivavy ao Makedonia hisafidy. Antsoina hoe “Momba anao ity!”, Ahitana lahatsary, misy andinin-tsoratra amin'ny teny Anglisy izany, mampiseho ny fomba fijery midadasika amin'ny tantara vao haingana momba ny ezaka fandràrana ny fanalan-jaza any Makedonia.
Napetraka nandritra ny vanim-potoana sosialista ny zo hifidy ho an'ny vehivavy ary tsy olana mihitsy nandritra ny dimampolo taona teo ho eo, saingy rehefa tonga teo amin'ny fahefana tamin'ny taona 2006 ny fitondrana elatra havanana ankehitriny, namoaka lalàna vaovao momba ny Fanalan-jaza izy ireo tamin'ny 2013. Araka ny voalazan'ny lahatsoratra navoakan'ny mpikatroka “Safidy”, ny lalàna teo aloha tamin'ny 1972 dia:
… nanolotra fiarovana lehibe kokoa ho an'ny vehivavy amin'ny zo hiteraka. Tsy nahitana fangatahana an-tsoratra tsy maintsy atao, na fakàn-kevitra tsy maintsy atao sy mitanila, na fotoam-piandrasana 3 andro tsy maintsy atao, na koa sakana ara-panjakana sy dingana hafa izay mety nandika ny zon'ny vehivavy hiteraka na nanohintohina ny fahasalamana sy ny fiainan'ny vehivavy.
Teo amin'ny taona 2008, nanomboka ny hetsika “Tsy Manaiky ny Fanalan-jaza” (“Абортус не”) miaraka amin'ny afisy nasongadina sarina zazarano maty ny fikambanana tsy miankina iray tsy fantatra teo aloha. Fotoana fohy taty aoriana, nanomboka ny hetsika ofisialy manohitra ny fanalan-jaza ny governemanta, izay nahitana takelaka, afisy, sy dokambarotra lafo tamin'ny fahitalavitra nandritra ny taona maromaro izay tamin'ny ankapobeny, naka tahaka ny maro tamin'ireo sary nampiasain'ny mpanohitra ny fanalan-jaza tany Etazonia. Ohatra, nampitahain'izy ireo tamin'ny famonoana olona ny fanalan-jaza na mampiely tahotra momba ny loza ara-pitsaboana virtoaly.
Dokambarotra iray nanasongadina mpivady tanora bevohoka. Misalasala hihazona ny zazakely ilay ho raim-pianakaviana raha tsy niteny azy ilay ho renim-pianakaviana fa lahikely ny zaza, toa nandresy lahatra azy ny tsy tokony hanalan'izy ireo ny zaza ny fahafantarana fa lahikely ny zaza.
Iray hafa kosa nifantoka tamin'ilay mpamoron-kira Alemana Beethoven. Araka ny dokambarotra, te hanala ny zanany ilay renim-pianakaviana, saingy moa ny zanak'olombelona va tsy nankafy ny halalin-tsainy.
Amin'ny horonantsarin-kira voalohan'ny hetsika manohitra ny fanilikilihana nanomboka tamin'ny 10 Desambra, dia nolazain'ny mpikatroka heviny amin'ny fiantraikan'ny fanentanana manohitra ny fanalan-jaza ataon'ny fanjakana eo amin'ny fomba fijerin'ny vahoaka ny fanalan-jaza. Amin'ny maha-manam-pahaizana momba ny maha-lahy sy vavy azy dia hoy i Marina Trajkova: “Ny singa miavaka dia nametraka ny fomba fijerin'izy ireo mifototra amin'ny hafatra amin'ireo lahatsary ireo ny ampahany amin'ny lehilahy.”
Ny horonantsarin-kira faharoa dia mitantara ny hetsika 2013 manohitra ny fanovana ny lalàna izay nametraka ny fanalan-jaza ara-dalàna ho sarotra tanterahina kokoa sy ny paikady amin'ny haino aman-jery miaraka amin'izany. Nandany izany fanovana izany ny parlemanta nandritra ny fotoam-pialantsasatra. Araka ny filazan'ilay mpikatroka, Ana Vasileva: “mihevitra aho fa nosafidiana ny fotoana handaniana ireo fanitsiana ireo tao anatin'ny fotoana tsy nahatongavan'ireo mpikatroka marobe maneho ny hatezerany … izany hoe tsy misy olona manohitra na manandratra ny feon'izy ireo“
Ny horonantsary fahatelo dia miresaka ny voka-dratsin'ny fanovana ny lalàna. Raha fintinina amin'ny tenin'ilay mpilatsaka an-tsitrapo Maja Mrmova: “Taorian'ny fandaniana ny lalàna, nolavina tamin'ireo vehivavy maro ao Makedonia ny zon'izy ireo hanala zaza.”
Vehivavy vitsy niharan'ny vokadratsin'ny lalàna vaovao mandràra ny fanalan-jaza no sahy niresaka momba izany imasom-bahoaka. Tranga iray ohatra, tsy maintsy nangataka fahazoan-dalana hanala zaza naharitra sivy andro tany amin'ny minisiteran'ny fahasalamam-bahoaka ny vehivavy bevohoka iray izay tandindomin-doza ny ainy noho ny tsy fahatomombanan'ny fiforonan'ny zaza ao an-kibony. Naoraketin'ny H.E.R.A. sy fikambanana iray hafa, Reactor; ireo tranga mahazo ireo vehivavy voatery mizaka ny itoeran'ny zaza maty ao an-kibony izy ireo mandritra ny andro maromaro noho ny tsy maintsy iandrasana ny faharetam-potoana tsy maintsy hajaina.
Mampiasa ny diezy #АбортусСтигма (Fanilikilihana noho ny Fanalan-jaza) amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy ny mpikatroka mba hampisy adihevitra eo amin'ny vahoaka. Mpisera Twitter iray nampahatsiahy ny fihetseham-pony tamin'ny iray tamin'ireo dokambarotry ny governemanta amin'ny fahitalavitra:
Toa mahatsiaro mikiakiaka aho raha nilaza ilay mpanampy mpitsabo ao amin'ny dokambarotry ny governemanta hoe, “Arahabaina, vao avy namono zazakely ianao”
Nandritra ny fampisehoana ny dokambarotra novoizina etsy ambony, niditra an-tsehatra ny sampana mpandrindra ny haino aman-jery ao amin'ny firenena ary nanivana ny “avy namono olona ianao”. Hoy ny vakin'ny lahatsoratra amin'ny dokambarotra: “Arahabaina, nahomby ny fanalan-jaza. –BEEP – zaza salama tsara tokony ho lehibe ao anatin'ny zazalahy na zazavavy mahafatifaty …».
Satria mikasika ahy izany, ny fanapaha-kevitra hanala zaza na tsia dia tokony ho zoko samirery.
Mampitombo ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy ny famerana ny zo hanala zaza.
Ho solon'ny hetsika fanentanana manohitra ny fanalan-jaza, dia tokony ny ampidirina any an-tsekoly ny fanabeazana ara-pananahana.